Sheeko Gaaban: Talasan | HIGIL
Sheeko Gaaban: Talasan
Posted on Khamiis, Luulyo 19, 2012 by Jidhidhico	Faallo u dhaaf
“Oo ma kala xigtaan Dheegtayda curad—oo ay waliba qasab igaga kaxaysan karaan—ee sidaas ma ogtahay?” sow kuma aadan shiiqin hadalkiisa, uguna darin waliba, “Tuugga noo soo dhacay, ee aan wax naga dhicin ba Soomaali aan dhaqan suubban lahayn ayuu ahaa. Marka, iga…” Adiga oo hadalkaas wata sow Xafaarre kaama soo dhex galin, isaga oo leh, “Tuug aa! Tuug in aad maryahaaga dubato ma ogsoona miyaa? Ma ogsoona in Jirde jaceel uu ku galay London adigana wax ba kuu soo tuurin maalmahaan?” Markii uu Xafaarre baddaas galay, sow adiguna maadan ku soo gaabin hadalka, “Boowe Xafaarre, shaqadaada gal, shuqul kasta daf ha iska dhihine!”
Duqey, ilinta dabkii aad casaysay kaa basin lahayd kaama soo dhicin. Niyaddaada waxaad ku dhisatay in wixii saacado ka hor ku soo maray ay kuwa ka xumi Soomaali badan haystaan saacad kasta. Waxaa foolkaaga soo fuulay afarta aad haysato oo ay baddu liqday, sida kumaankun kale oo da’dooda ah ay u liqday. Waxa kalood ka murugootay waalidiinta ku la mid ka ah oo carruurtoodii dhib-moogga ahaa har galay dhiiggooda la shubtay. Taas ayey se kuu raacday maruuryada aad ka fikirtay wiilkaagii curad-xig oo laga yaabo in isna dhexda loogu soo boqro walxo uu biri-mageydo aan wax ba ka galabsan ku halligo.
Gaarkaaga, adiga ayaa Duqey ka carooday kalmaddaas Fartuumo. Waxaad na ku adkaysay Fartuumo in wixii qalloocda uu Rabbi toosiyo, wiilkaaga aad dhabta ku hayso na uu Eebbe soo celiyay, Shabaab na ka soo furtay. Waxaad micnaysay in godka wiilkaaga laga soo saaray ay la mid tahay wiilkaagii oo inuu iska dhinto ka door biday in uu saaxiibbadiis iyo walaalihiis isku mar galaafto, oo la dhinto. Hadalladaas lagu qiiroonaayo markii aad dhammaysay baa wiilkaagu dhabtaada ku ooyay. Hadduu ba soo miyirsaday, wuxuu dib u ceshan waayay inuu runta soo butaaco: Inuu ahaa kii xalay guriga idinku soo jabiyay isaga oo u jibbaysnaa xoog-ku-qaadashada kutub uu awowgiis u haysan jiray tafaaful-furista. Waa kii idiin caddeeyay in loogu sheekeeyay, oo laga buuxiyey, wax walba oo ka hor istaaga hadafkiisaas (uu muddaba idiinku dul meeraysanaayey) inuu yahay cadow uu shaydaanku ku shaqaysto. Waana sababta uu yiri waan idiin laayey, ee Danabkii baxso is yiri uu caloosha uga harraatiyey, adigana Duqey kuugu diirnixi waayey markii uu kuu cagajuglaynaayey.
Waxaas oo mashaqo ah, oo uu shaaca ka qaaday wiilkaagu, waxaa maydhay talasankii aad Duqey kula dardaarrantay isaga iyo inta da’diisa ah. Waana markii aad tiri, ‘Hooyo, qof qoyskiisa cadow ka dhigtay Walluusan cadow kale u babac dhigi karin! Waan ogahay in maskaxdiinna oo aan korin la jahwareeriyo, oo cuqdadda la idinka buuxiyo ay idiin horseeddo in aad tarbiyaddii waalidkiinnu idinku koriyey ka tagtaan, waxaad doontaanna samaysaan—illeen “ka jooga” dadkan aad u shaqaysaan idin ma dhahaan waxaan ka ahayn “ku dhufta, oo ku dhinta.” Waxaana la idiin ku sheekeeyaa mabda’ii Cali lagu dilay, oo ay kaaga-daranka la qabaan dad badan oo meelo xasilloon waddankan iyo dunidaba ka kala dagan, in ay ummadani ku cisoobayso—iyada oo waxa cisi ay ummadani leedahay cagta la marinaayo. Gaajada iyo jahliga na daashaday, haddii ay cilmi iyo buruud ba hayaan, may nooga gargaaraan inta ay na madhinayaan? Marka ay xoogaystaan iyo marka laga xoog roonaado ba maxaa dadweynaha ku diray, oo ay u baabi’iyaan? Hooyo waad is arkaysaan dulmigaase dugsiyada ha ka saaqidina, wax-barashadaa lagu ciil baxaa, ood dadkiinna wax ugu taraysaane.’
Previous post ← Hooyaday!
Next post Ballan-jab →